यी पुरानो नेपाली पैसा तपाइ सङ्ग छ भने कमेन्टमा सम्पर्क नम्बर छोड्नु होला? - dautarimedia.com
यी पुरानो नेपाली पैसा तपाइ सङ्ग छ भने कमेन्टमा सम्पर्क नम्बर छोड्नु होला?
इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नु हुन्छ । यस्तो पुरानो पैसाको मुल्य अहिले लाख भन्दा पनि बढी छ कसरि बेच्ने ? हेर्नुहोस य
केहि बर्ष देखि विदेशमा पुराना नोट हरु बिक्रि गर्ने चलन थियो यो आजभोली नेपालमा पनि त्यतिकै मजाले चल्न थालेको छ । पुराना राणा शासनमा काटिएका नोटको मूल्य लाखौं पर्ने गर्दछ ।तपाई संग पनि नेपाली पुरानो नोट छ भने यसरि बिक्रि गर्न सक्नु हुन्छ । eBay को एउटा खाता खोल्नुहोस । .(कहाँ कसरी बेच्ने? बेच्ने तरिका सिक्नको लाई ?पुरानो नोट तुरुन्तै बेच्नको लागि यो लिन्क
राजविराज, ७ भदौ (रासस) : लगातारको वर्षाका कारण सप्कोशी नदीमा आएको बाढीले सप्तरीको कोशी टप्पु भनेर चिनिने गोबरगाढाका बाढीपीडित भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका–१३ गोबरगाढाका झण्डै ३५ परिवार विगत चार दिनदेखि राहतको पर्खाइमा छन् । कोशी नदीमा आएको बाढीले गोबरगाढाका घर जलमग्न भएका थिए । वडाध्यक्ष बिन्देश्वर यादवका अनुसार स्थानीय प्रमोद , रामस्वरुप , हरिबोध , रामानन्द , कुशेश्वर, भुवनेश्वर , सन्तोश , महेन्द्र यादवलगायतका घर जलमग्न भएको थियो ।
अझै घर आँगनमा दुई÷तीन फिटसम्म बाढी रहेकाले खाना पकाउन समस्या भइरहेको जनाइएको छ । स्थानीयवासी सीताराम यादवले भन्नुभयो “ खाद्यान्न पनि सकिन लाग्यो । के खाएर छाक टार्ने ?” प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले खाद्यान्न लगायत राहत वितरणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको जानकारीदिँदै आवश्यकताअनुसार शीघ्र राहत वितरण गरिने जानकारीदिनुभय
तीनहप्तादेखि ठप्प रहेकोे राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण अझै सुरुआत हुन सकेको छैन । गत साउनको दोस्रो हप्तादेखि सो पीसीआर मेसिनमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि परीक्षण रोकिएको छ । कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको जोखिम बढिरहेको बेला अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण नै रोकिएपछि बिरामीलाई समस्या भएको छ ।
Previous: काठमाडौं बासिका लागि महानगरपालिकाले ल्यायो यस्ताे अनौठो नियम, सबैले छिटाे हेर्नुहाेला
Next: तिमी भ’र्जिन हो भन्ने प्रश्नमा चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीको जवाफ !